मुख्य सहर संक्रमणको हटस्पट « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
५ माघ २०७८, बुधबार ०७:१६
काठमाडौं । कोरोना भाइरस फेरि द्रुत गतिमा फैलिन थालेको छ। यसको संक्रमण देशव्यापी देखिएको छ । सीमावर्ती सहर र मुख्य सहरमा दैनिक संक्रमितको संख्या उच्च छ। देशभर मंगलबार २२ हजार ८ सय २८ नमुना परीक्षण गर्दा १० हजार २ सय ५८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो नै पछिल्लो समयको सबैभन्दा उच्च दैनिक संक्रमण हो ।
परीक्षण गरेकामध्ये झन्डै ५० प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । यससँगै मृत्युदर पनि सुरु भएको छ। मंगलबार एक जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बढ्दो सहरकेन्द्रित संक्रमणले गाउँमा पनि फैलिने जोखिम देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता कौशल मिश्राका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या ३९ हजार ४४ पुगेको छ। पुस दोस्रो सातासम्म संक्रमणदर दुई प्रतिशत हाराहारी थियो । मंगलबार संक्रमणदर ४४.९ प्रतिशत पुगेको छ । ‘संक्रमित दैनिक बढेका छन्। संक्रमणदर पछिल्लो समय उच्च छ’, प्रवक्ता डा. मिश्राले भनिन्, ‘यो दर अझै बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा संक्रमितको संख्या दोब्बरले वृद्धि हुँदै गएको छ । मुलुकभर दैनिक पुष्टि हुने संक्रमितमध्ये उपत्यकामा झन्डै ५० प्रतिशत हुने गरेको डा. मिश्राको भनाइ छ । मंगलबार काठमाडौंमा मात्रै ४ हजार ४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा दोब्बर बढी हो। ललितपुरमा ९ सय ४७ र भक्तपुरमा ५ सय ७० जना संक्रमित थपिएका छन् ।
आगामी तीन साता संक्रमणको हिसाबले जोखिमपूर्ण हुने स्वाथ्यविज्ञ बताउँछन्। दैनिक संक्रमित २० हजार ५ सय नाघ्ने मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलको आकलन छ । ‘माघ दोस्रो सातादेखि तेस्रो सातासम्म संक्रमणदर अझै बढ्छ । आगामी तीन साता जोखिपूर्ण छ’, सचिव डा. पोखरेलेले भने । उनका अनुसार डब्लूएचओ र स्वास्थ्यका विभिन्न ‘टुल’ प्रयोग गरी संक्रमण फैलावटको अनुमान गर्ने गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबै जिल्लामा सक्रिय संक्रमित छन् ।
उपत्यका बाहिरका मोरङ, सुनसरी, कास्की, रुपन्देही र कैलाली जोखिमको सूचीमा परेका छन् । यी जिल्लामा ५ सयभन्दा माथि संक्रमित अस्पताल भर्ना भएका छन् । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार भाइरसको संक्रमण सीमावर्ती सहरकेन्द्रित भइरहेको छ । शैक्षिक एवं स्वास्थ्य उपचारको केन्द्र भएका सहरी क्षेत्रमा आवतजावत बढी भएकाले नै संक्रमण विस्तार भइरहेको जनस्वास्थ्य विज्ञको भनाइ छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. जीडी ठाकुर स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा हेलचक्र्याइँ भएका कारण नै सहरी क्षेत्रमा संक्रमण बढ्दै गएको बताउँछन् ।